Steve Wozniak: "Hatigone kuvimba neHurumende" | IPhone nhau
Sezvo Apple yakaburitswa tsamba Mune izvo zvaakaramba kupa rubatsiro rwake kuvhura iyo iPhone 5c ye sniper yakakonzera kufa kwe14, pakave nemakambani mazhinji uye nevanhu vakakosha vakamupa rutsigiro. Sundar Photosi (Google), Edward Snowden (muratidziri) kana Jan Koum (muvambi weWhatsApp) vanga vari vatatu vevanhu ava vakabatana naTim Cook muhondo yake yekuchengetedza zvakavanzika zvevashandisi. Wokupedzisira kutaura aive mubatanidzwa weApple, Steve Wozniak.
Wozniak munhu asinganyunyuti mazwi. Anotaura zvaanofunga, nguva dzose. Apple payakaunza iyo iPhone 5, yakati "yaingova iPhone 4S iine imwezve mutsara wemifananidzo»Uye pavakavhura iyo iPhone 6, hazvina kutora nguva vasati vataura kuti vaive vanonoka makore matatu mumusika iwoyo. Iye zvino anoti isu hatigone kuvimba neHurumende uye tiri kudivi raTim Cook mugakava ravo kupokana neFBI tichida kuvanzika kwedu.
Woznkiak inotorawo divi rekuvanzika
Ini ndinotenda iro Apple rakasarudzika mhando uye kukosha kwayo uye mabhenefiti zvinowanzoenderana nechinhu chinonzi kuvimba. Kuvimba kunoreva kuti unotenda kune mumwe munhu. Iwe unofunga urikutenga foni ine encryption.
Iwe haugone kuvimba kuti ndiani ane simba. Zvakafanana nekutenda kuzviremera nemapurisa kwese kwavanoenda. Kazhinji pavanonyora mirau, vanenge vachitaura chokwadi kunyange pavari kutadza.
Ugandanga ishoko remanyepo riri kushandiswa. Iyo yazvino kesi Apple inosanganisirwa mukati yaifanira kuve iine - ndinofunga yaive yekupfura kana kuuraya kana chimwe chinhu. Yakanga isiri hugandanga. Unoziva here kuti chii chinonzi hugandanga? Ingori mhosva yakadzika. Izwi rekuti "gandanga" rakashandiswa kakawanda kutyisidzira vanhu.
Paakabvunzwa kana aifunga kuti Apple yaizopedzisira yabvuma chikumbiro cheFBI, Wozniak akabvuma kuti zvinotyiwa asi haazive. Dai aive kuApple aizoita zvimwe chete zvavari kuita uye Ini ndaizorwa kusvika kumagumo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Steve Wozniak: "Hatigone kuvimba neHurumende"
Smartwatch inotengesa inopfuura yechinyakare mawachi eSwitzerland